Maxkamada sare ee dalka oo goor dhow go’aan ka gaari doonta Kiiska Wariye C/casiis Koronto – idalenews.com
Maxkamada sare ee dalka ayaa goor dhow lagu wadaa in go’aankii ugu dambeeyay ka gaari doonto kiiska Wariye C/casiis Koronto, oo dhowaan Maxkamada racfaanka ay ku xukuntay lix bilood oo xarig ah.
Sida ay sheegayaan wararka kiiska dacwada oo bilaabatay goor dhow ayaa qareenada difaacaya Wariye C/casiis Koronyo ay u gudbiyeen dacwada kama dambeysta ee ay ka qaadanayaan racfaanka, iyadoo Gudoomiyaha Maxkamada uu ku sugan yahay Gudoomiyaha Maxkamada sare Ceydiid Ilkaxanaf.
Wararka ayaa sheegaya in Maxkamada ay u yeertay qareenada u doodaya Wariyaha, iyadoo laga hadlayo qodobadii maxkamada racfaanka u cuskatay oo ku aadan xeerka ciqaabta Soomaaliyed ee ka hadlaya qaran dumis, taasoo lagu tilmaamay in qodobadaas aanay wax shaqo ah ku laheyn xarigiisa.
Xeer Ilaaliyaha Maxkamada ayaa la sheegay in dacwada sida uu u dhigay aanu si rasmi u abaarin, isla markaana go’aanka maxkamada riday ay tahay mid ka duwan eedeymaha dacwada markii hore Wariyuhu lagu soo oogay.
Gudoomiyaha Maxkamada sare ayaa hada banaanka u baxay, waxaana la filayaa in marka uu dib ugu soo laabto uu soo saaro go’aan kama dambeys ah, taasoo laga yaabo in Wariyuhu cafis loo fidiyo.
Wariyeyaal ku sugan goobta Maxkamada ayaa sheegaya inay u badan tahay in kiiska Wariyaha maanta la soo afmeeri doono, isla markaana hadal heynta ay tahay in cafis loo fidin doono.
Bishii Janaayo ayay aheyd markii Wariye C/casiis Koronto iyo Haweeney sheegtay in la kufsaday markii xabsiga loo taxaabay, waxaana bishii Febraayo Maxkamada ay ku xukuntay min hal sano, inkastoo markii racfaan laga qaatay Maxkamadu ay sii deysay haweeneydi la kufsaday, halka Wariye C/casiis Koronto lix bilood lagu xukumay.